Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Tallaalka Sputnik ee Ruushku wuxuu faa'iido u yahay dalxiiska Phuket
Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Ruushka • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Tallaalka Sputnik ee Ruushka
Phuket waxay sannado badan ahayd meel aad loo jecel yahay oo ay la socdaan socdaalayaasha Ruushka, iyagoo ugu sarreeya sannadka 2019 oo ay yimaadeen in ka badan 700,000 muddo 5 bilood gudahood ah oo ku beegan 2019, dhammaantoodna waxay ku yimaadeen duulimaad toos ah oo ka yimid Xiriirka Ruushka. Wadar ahaan 1.4 milyan oo reer Russia ah ayaa booqday Phuket sanadka 2019.
Xarunta Thailand ee Maamulka Xaaladda COVID-19 (CCSA) ayaa oggolaatay tallaalka Sputnik ee Ruushka.
Suuqa Ruushka ee ka baxsan waa kan ugu weyn adduunka ee ka baxsan Shiinaha.
Markay Ruushku isu diyaarinayaan inay geesinimada yeeshaan xilliyada dayrta iyo jiilaalka, oggolaanshaha tallaalka Sputnik ayaa ah waqtiga ugu habboon ee xilliga sare laga bilaabo Noofembar sannadkan.
Xilliga roobka barafka ee caadiga ah laga bilaabo Nofeembar ilaa Maarso waa marka heerkulku si aad ah hoos ugu dhaco Ruushka iyo sidoo kale qaybo badan oo waqooyiga Yurub ah, taas oo u muujineysa dadka safarka ah inay u duulaan duufaanka kuleylaha iyo cirka buluugga ah ee Phuket.
Maanta, daneeyayaasha dalxiiska ee Phuket, Thailand, waxay ku dhawaaqayaan oggolaanshaha astaanta u ah tallaalka Sputnik ee Xarunta Maamulka Xaaladda COVID-19 (CCSA) ee Thailand oo lagu wado inay furto suuqa Ruushka ee jasiiradda koonfurta Thai.
“Kani waa war aad u wanaagsan Phuket. Waxaa la joogaa waqtigii laga gudbi lahaa Sandbox -ka oo loo dhisi lahaa aasaaska hindise ballaaran oo dalxiis, ”ayuu yiri Guddoomiyaha Ururka Dalxiisayaasha Phuket, Bhummikitti Ruktaengam. “Warshaduhu hadda waxay ku noqon karaan aasaaska waxayna diiradda saarayaan xilliga qaboobaha waqooyiga Yurub. Tani waxay fursad weyn u tahay Phuket. Kuwani waa suuqyadeenii dhaxalka ahaa. ”
Laguna Phuket, oo ah goob isku -dhafan oo ku taal aagga caanka ah ee Bangtao Beach, oo ka kooban 7 huteel; Isbitaalka Bangkok wuxuu ku shaqeeyaa xarunta imtixaanka PCR; iyo hektar meelo bannaan, jardiinooyin iyo harooyin, ayaa durba ka -faa'iideyste sanduuqa 'Phuket Sandbox' iyada oo la siiyay sumcaddeeda nabdoon, laakiin tani waa tallaabo weyn oo loo qaaday sida uu sheegay Agaasimeheeda Maareynta, Ravi Chandran.
"The aqbalaadda tallaalka Sputnik waa mid wax ka beddelaya Phuket, ”ayuu yidhi. “Suuqa Ruushka ee bannaanka ka ah waa kan ugu weyn adduunka ee ka baxsan Shiinaha, waqtiguna waa ku habboon yahay xilliga sare oo bilaabanaya Noofembar sannadkan. Phuket Sandbox wuxuu caddeeyay inuu yahay mid guuleysta tanina waxay hadda gaarsiin doontaa guulahaas heerar aad u sarreeya wali dhammaan hoteellada, daneeyayaasha dalxiiska, iyo bulshada maxalliga ah ee jasiiradda. ”
Laga soo bilaabo 1 -dii Luulyo, in ka badan 300,000 oo qolal huteel ayaa la ballansaday ilaa dhammaadka Ogosto booqdayaasha caalamiga ah ee ka imanaya hindisaha Phuket Sandbox, tiro ayaa la filayaa inay si dhakhso leh kor ugu kacdo marka uu soo dhawaado xilliga sare. Diyaaradaha Ruushka ee jadwalka iyo kiraystaha ah ayaa la filayaa inay yimaadaan Phuket laga bilaabo Oktoobar 2021.
Isagoo ka hadlaya suurtagalnimada suuqa “diyaarsan”, Agaasimaha Maareynta Hoteellada C9, Bill Barnett, wuxuu yiri “Imaatinka yaababka jiilaalka ee 2021 iyo beddelidda suuqa, Ruushka, oo caadiyan leh celcelis ahaan 11-12 habeen oo joogitaan ah, waa kaamil ku habboon Sandbox -ka. ”